Ukubhala ngonyango, isibonelelo seengqondo zethu | Uncwadi lwangoku
Mhlawumbi ngelinye ixesha ukhe waziva ukuba sowuza kudubula. Umthwalo okanye usizi zisenza singakwazi ukuqhubeka nosuku lwethu.
Ukuveza iingcinga zethu ephepheni kunokuba yindlela esebenzayo nesempilweni yokuphelisa ezo ngcinga zingalunganga.
Ngamaxesha amaninzi sihamba kwinqanaba apho siziva silusizi okanye singenamdla kwaye asazi izizathu zolo luvo lusingenelayo. Ngamanye amaxesha kunzima ukuhambisa zonke ezo mvakalelo. Nokuba ngumsindo, lusizi, kukudana okanye yiphina indlela oziva ngayo, Ukubhala ngayo yindlela yokuphilisa iingqondo zethu kunye nokubeka izimvo zethu ngokulandelelana.
1 Yintoni ukubhala ngonyango?
2 Iindlela zophuhliso kunye nezibonelelo zazo
2.3 -Dlulisa idubhu:
2.4 Gcina uvuyo lwakho!
Yintoni ukubhala ngonyango?
Ukubhala ngonyango kubandakanya ukuveza zonke iimvakalelo ezingalunganga ezisenza sizive singalunganga. Nokuba kuba kunzima kuwe ukuba uvulele umntu okanye ubonakalise iimvakalelo zakho okanye ngenxa yokuba ungafuni kuchaza indlela oziva ngayo, olu nyango luya kukunceda.
Thatha incwadi yokubhalela, iphepha, i-napkin, ikhompyuter okanye nantoni na onokubhala kuyo kwaye ukhulule nantoni na ekutyayo ngaphakathi. Bhala nje.
Iindlela zophuhliso kunye nezibonelelo zazo
Asingcwele. Akukho namnye. Mhlawumbi nokuba kungengozi senzakalise umntu. Kwaye okwahlukileyo. Ukubhala ileta yokucela uxolo, nokuba asiyithumeli, kunokusenza sizive ngcono. Kufuneka ube nesibindi kwaye unyaniseke. Cinga lonto Le nto uyibhalayo yenzelwe wena kuphela, ke ungoyiki. Ukuba awuthembekanga kwisiqu sakho, unyango alunamsebenzi.
Ukuba kwinqanaba elidlulileyo besithetha ngokuzixolela, nathi sinethuba lokufunda ukuxolela abanye. Xa umntu osonzakalisile, enikezela imigca embalwa ngayo yonke into oyicingayo malunga nesimo sabo kunye neemvakalelo zakho, kuyakunceda ukukhupha. Ukuba sele unesibetho esingaphezulu okanye esincinci esaphiliswayo, ukubalisa kwasekuqaleni yonke into eyenzekileyo kwimeko yangoku, iya kusenza sigqibe ukuphilisa elo nxeba belisiluma kancinci.
Ngokuqhelekileyo sidibanisa igama elithi "ukulila" kunye nokufa komntu othandekayo. Ngokobuchwephesha, usizi yinkqubo yohlengahlengiso lweemvakalelo kuyo nayiphi na ilahleko. Nokuba, njengoko sele sitshilo, ukufa, iqabane, umsebenzi okanye enye into ibiyinto ebalulekileyo ebomini bethu. Ukubhala malunga neemvakalelo ezithathe iingqondo zethu kuya kusinceda ukuba sizole uxinzelelo. Bhala ephepheni yonke into oza kuyithetha kwiqabane lakho langaphambili, umphathi okugxothileyo okanye webhanki. Uya kubona ukuba ngokungazi uza kuqala ngaphi ukuguqula intlungu okanye umsindo emva koko ukungakhathali kulowo mntu kuya kufika. Yenza njengoko ubuya kuyithetha buqu kwaye, ukuba uyafuna, yikrazule ibe ziingceba.
Xa ngelishwa sibhekisa ekuphulukaneni nomntu, myeke ahambe.
Gcina uvuyo lwakho!
Akufuneki sishiyeke ngokubi kuphela. Ukuba uhlala une-streak embi, ungaphoswa lusuku olunye olulungileyo. Indlela elungileyo kukugcina ijenali yeengcinga ezintle kunye neentsuku.. Thela kuye lonke uvuyo oziva ngalo mini okanye ngalamzuzu. Mhla sidinga ukutyhilwa kuba yonke into inamafu ngandlela thile, sithatha incwadana kwaye sifunde kwakhona oko akubhalileyo. Akukho nto imbi inokwenzeka ukuba ilikhulu leminyaka.
I-subconscious inamandla kakhulu. Ngamanye amaxesha kufuneka uphakame kuye umbuze ukuba kutheni edlala ngathi ngoluhlobo. Mbhalele, zibhalele, ubhalele loo mntu okanye ubomi obufanayo obudlalileyo kuwe wamvumela ukuba ahambe. Kulungile? Akukho mfuneko yokuba uqhekeko ekubhaleni, kufuneka uvumele amagama aphume ngokwawo.
Isenzo sokubhala sinceda ukubeka iingcinga zakho ngokulandelelana. Isebenza ngengqondo yethu, isenza siqonde izinto esingaziqondiyo okanye esingazaziyo ukuba zikhona. Ukubhala ivuselela inkumbulo yethu kunye nengcinga yethu.
Kwaye ngubani owaziyo ... mhlawumbi ngenye imini yonke into oyibhalileyo iya kunceda umntu ukuba oyise ukothuka okanye uloyiko. Ke ngoku uyakwazi ukubhala!
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Ezahlukeneyo » Ukubhala ngonyango, isibonelelo seengqondo zethu